Lapho intombazane ihlangana nomuntu wamaphupho akhe , ukhohlwa konke. Ikakhulukazi uyakhohlwa ukuthi uzothini nokuthi kanjani. Eyesaba ukulahlekelwa nguye, wesaba ukukhuluma kuqala noma ngisho nokulahlekelwa isipho sakhe sokukhuluma. Ngakho intombazane ingangena kanjani ingxoxo nomfana?
Kunezindlela eziningi zokuxazulula le nkinga.
Okokuqala , udinga ukulahla konke ukwesaba ngaphandle bese ungena ngaphakathi. Ubani ongenzi izingozi, bese engaphuzi i-champagne! Futhi abantu bayayithanda lapho amantombazane ebonisa ukuzimisela ezenzweni zabo.
Okwesibili , khumbula - wena-yilokho abantu abakufunayo. Ngokuqinisekile bayobukeka ngokuqondisa kwakho uma ubakhohlisa. Nsuku zonke, ukuphuma, kufanele ubukeke uphelele.
Okwesithathu , kunezinombolo ezijwayelekile neziphakamiso ezimbalwa ezingajwayelekile, ongaqala ingxoxo nomfana. Abesifazane abaningi bakuthola kunzima ukuphumula uma bengenaso isiqiniseko sokuthi bangaqala ingxoxo nomfana. Kodwa futhi kudingeka uhlale eceleni kwakho futhi uziphathe ngokwemvelo. Sivame ukukhohlwa ukuthi abantu abaningi banamahloni njengamantombazane. Noma yikuphi, kusukela kumfana onamahloni kusukela ku-choir nakwezingcweti zobuchwepheshe bekhompuyutha, bonke bayaqaphela amantombazane, abazi nje ukuthi bangasondela kanjani nokuthi bayothini. Ngakho thatha okunye ngezandla zakho!
Phakathi kwalezi zintathu okumele uqaphele lokhu okulandelayo, okuyinto ongakhetha ukuqala ingxoxo nomfana:
Wayixazulula kanjani umsebenzi # 15? (uma kwenzeka engenamandla ngesiNgisi futhi ebuka umsebenzi wakhe wesikole)
Yimuphi i-movie enhle owabukele kamuva? (ngakho intombazane ingaqala ingxoxo nomfana uma nonke nimi emgqeni ohlwini lwamahhashi)
Futhi ngubani owashaya umgomo? (uma lo mfana ehlezi phambi kwentombazane emdlalweni webhola lezemidlalo)
Kungani bengalokothi bapheke ama-hamburgers? (uma uhlala ndawonye esikoleni samantombazane esikoleni)
Uke waphila kuphi? (uma usanda kufika)
Yiziphi iziphambano ezimangalisayo, i-sweater enhle, njll.
Ingabe kukhona ushintsho wama-ruble angu-20? (kuze kube yilapho umyeni ehlola, ungayeki ukukhuluma naye)
Ungangitshela lapho umtapo wolwazi? (mhlawumbe uzokuqondisa ...)
Sawubona! (lapho umfana ezophendula ngokufanayo)
Uke wafika lapha ngaphambili? (isimo esivumelwaneni, e-cafe noma kudokotela)
Uvelaphi? (uma uhamba ngesitimela, emcimbini, ekhonsathini, enhle, njll)
Futhi uvame ukuhamba kude? (uma le ntombazane ibanjwe nomfana emgwaqweni epaki noma emgwaqweni futhi owazi ukuthi bangaki abagijima ndawonye ...)
Isikhathi sini? (emva kwempendulo, dumisa iwashi lakhe noma usho okuthile okuthakazelisayo ngaye)
Yabelana ngencwadi yokufunda ngezibalo? (ikakhulukazi ungashiyi incwadi ekhaya, kodwa uma kwenzeke ukuthi ukhohlwe - bamba ithuba!)
Ngiyazi ubuso bakho kahle. Uke waya ekamu ...?
Ingabe ulinde isikhathi eside? (uma ume emgqeni omude ebhasi)
Ubani umfundisi wakho womlando? (emi phambi kwesimiso)
Futhi futhi imvula! (trite, kodwa win-win, ukuqala ingxoxo nomfana)
Ufunde kanjani lejubane lokunyathelisa? (noma ukucula, ukudansa, ukuthatha izithombe, njll)
Futhi lokhu akuyona indawo evela ku ...? (ifilimu, incwadi noma ukubonisa)
Futhi awusiye umfowabo kaSveta, akunjalo? (njengokungathi ungabaza, kodwa ngokuphindaphindiwe ungafunda kabanzi ngakho)
Uyazi ukuthi isikole sethu sizothola yini i-disco? (noma mhlawumbe uzomema?!)
Izolo awukho lapho futhi iklasi ayinalutho ...
Yiqiniso, lezi yizicabango kuphela mayelana nesimo esingenzeka sokuthandana nomfana. Kodwa okubaluleke kakhulu, qiniseka futhi umamatheka lapho uqala ingxoxo nomfana. Akufani nenye into edonsa abantu komunye nomunye. Abantu abaningi bakwenza ngenhloso, kodwa wenza kube yisimiso esiyinhloko empilweni yakho. Smile, kungakhathaliseki ukuthi yini. Lokhu akugcini nje ukwandisa imizwelo, kodwa futhi kunikeza amandla okuphila futhi ujabulele ngisho nokuthokoza okuncane kakhulu. Akalimazanga noma ubani kulo mpilo okwamanje. Smile - umshini wakho lapho ukhuluma nomfana! Sebenzisa ngokumelene namadoda, futhi ngeke ulahlekelwe.
Indlela yokwenza umfana aqonde ukuthi ngimdinga
Indlela owesifazane okufanele abheke ngayo ukuthanda indoda
Uthando oluhle, abantu abangabazi ababili
Ukuthandana kweholide nokuthanda amakhono
Amathuba okuthandana komsebenzi, uma indoda nowesifazane besisebenza ndawonye
Indlela yokugcina impilo uma kwenzeka ukucindezeleka
Ungamsiza kanjani ingane ukuba ivumelane nesingeniso?
Indlela yokuheha uthando nge-feng shui?
Inkukhu ebhakawa ngamakhowe kanye newenge
Isobho se-Pea ku-multivariate